Jupiter Planet: Njirimara, ihe mejupụtara na ikuku | Netwọk Mgbasa Ozi
N'isiokwu ndị gara aga anyị kwuru banyere njirimara niile nke anwụ. N'okwu a, anyị ga-elekwasị anya ụwa Jupita. Ọ bụ mbara ala nke ise kachasị dịkarịsịrị na Sun na nke kachasị ukwuu na mbara igwe niile. N’akụkọ ifo ndị Rome o nwetara aha eze nke chi dị iche iche. Ọ bụ ihe ọzọ na ihe na-erughị 1.400 ugboro ibu karịa Earth na size. Agbanyeghị, ogo ya bụ naanị ihe dịka ugboro 318 na ụwa, ebe ọ bụ na ọ dị gas.
Chọrọ ịma ihe niile metụtara na mbara igwe Jupita? Na nke a, anyị ga-enyocha ya nke ọma. Naanị ị ga-anọgide na-agụ 🙂
1 Àgwà Jupita
2 Eluigwe na Ọnọdụ
3 Ngwakọta, nhazi na ndọta
4 Satellị kacha mkpa
Njupụta Jupita dị ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ njupụta nke ụwa anyị. Otú ọ dị, ime mebere ukwuu n'ime ikuku hydrogen, helium na argon. N’adịghị ka ụwa, ọdịiche doro anya dị n’etiti ụwa na mbara ikuku. Nke a bụ n'ihi na ikuku ikuku nke ikuku na - agbanwe nwayọ.
A na-ejikọ hydrogen ọnụ nke na ọ dị na mmiri mmiri dara. Nke a anaghị eme na ụwa anyị. N'ihi ịdị anya na ihe isi ike nke ịmụ ihe dị n'ime mbara ala a, amabeghị ihe ntọala ahụ mejupụtara. A na-ekwu na nke ihe okwute n'ụdị ice, nyere ogo dị ala.
Banyere ike ya, Otu mgbanwe gburugburu Sun ọ bụla 11,9 yearswa afọ. N'ihi oke na orbit dị ogologo ọ na - ewe ogologo oge iji gaa Sun karịa ụwa anyị. Ọ dị na nrugharị nke 778 nde kilomita. Wa na Jupita nwere oge ha na-agaru onwe ha nso ma na-agbasakwa nso. Nke a bụ maka na mbido ha abụghị otu afọ. N’afọ 47 ọ bụla, ọdịiche dị n’etiti mbara ala dị iche.
Obere oge dị n’etiti mbara ala abụọ a bụ kilomita 590. Ebe a dị anya mere na 2013. Mana, mbara ala ndị a nwere ike ịchọta n’ogo dịkarịsịrị na nde kilomita 676.
Eluigwe na Ọnọdụ
Jupita's equatorial diamita bụ 142.800 kilomita. Ọ na-ewe naanị ihe dịka elekere itoolu na nkeji 9 iji gbanye eriri ya. Ntughari a ngwa ngwa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ hydrogen na helium na-eme ka eriri nke ikuku nke a na-ahụ mgbe a na-ele mbara ala site na teliskop. Ntughari a adighi edo edo ma otu ihe anahu anya na Sun.
Ikuku ya miri emi. Enwere ike ịsị na ọ na-ekpuchi ụwa dum site na n'ime ruo n'èzí. Ọ dịtụ ka Anyanwụ.Ọ nwere hydrogen na helium nke nwere obere methane, amonia, vapo mmiri, na ogige ndị ọzọ mejupụtara ya. Ọ bụrụ na anyị eruo omimi miri emi nke Jupita, nrụgide a dị ukwuu nke na atọm hydrogen na-agbaji, na-ahapụ electron ha. Nke a na - eme n'ụzọ dị iche iche na --emepụta atom ọ bụla bụ naanị proton.
Nke a bụ etu esi enweta mmanụ ala, akpọrọ hydrogen metallic. Njirimara ya bu na o nwere otu ihe di ka ihe eji etinye mmiri.
Ihe ngosi ya gosipụtara na ụfọdụ agba agba ogologo, igwe ojii na oke ikuku. Cloudgwé ojii na-agbanwe na awa ma ọ bụ ụbọchị. A na-ahụkarị ọnya ndị a n'ihi ụcha pastel nke igwe ojii. A hụrụ agba ndị a na Nnukwu Uhie Red nke Jupita. Ọ bụ ikekwe akara ama ama na mbara ụwa a. Ma ọ bụ oké ifufe nwere ọdịdị dị egwu nke nwere ọdịiche dị iche site na brik na-acha uhie uhie na pink. Ọ na - emegharị n’akụkụ ụzọ ọ bụla ma na - arụ ọrụ kemgbe ogologo oge.
Ngwakọta, nhazi na ndọta
Dị ka e kwuru na mbụ, ihe ndị a na-ahụ anya site na havewa egosiwo na ọtụtụ n'ime ikuku Jupiter nwere hydrogen molekụla. Infrared ọmụmụ na-egosi na 87% bụ hydrogen na 13% nke ọzọ bụ helium.
Njupụta a hụrụ emeela ka anyị nwee ike ịchọpụta na n’ime mbara ụwa ga-enwerịrị otu ikuku ahụ. Ihe mejupụtara mbara ụwa a bụ ihe abụọ dịkarịsịrị nta ma karịa karịa na mbara igwe. Nke a na - eme ka ọ nwee ihe mejupụtara nke Sun na kpakpando ndị ọzọ.
N'ihi ya, Jupiter nwere ike isi na mbara igwe nke sitere na mbara igwe. Nke a bụ igwe ojii dị n’etiti ikuku na uzuzu nke usoro mbara igwe anyị niile siri na ya pụta.
Jupita na-ewepụta ihe karịrị okpukpu abụọ karịa ike ọ na-enweta site n’anyanwụ. Isi mmalite nke na-ewepụta ike a sitere na mkpụmkpụ nke mkpụmkpụ nke ụwa niile. Ọ ga-abụ ihe ruru otu narị okpukpu buru ibu maka igwe ahụ ịmalite mmeghachi omume nuklia dịka nke Sun na kpakpando. Enwere ike ịsị na Jupita anwụ achaala.
Ọnọdụ ahụ nwere ọchịchị ọgba aghara na enwere ọtụtụ igwe ojii. Ọ dị ezigbo oyi. Oge mgbanwe ọnọdụ ihu igwe na mbara igwe Jupita na-egosi usoro mgbanwe nke ikuku dị ka nke mpaghara ụwa nke mbara ala ụwa. Ọ bụ ezie na ọ bụ naanị akụkụ dịpụrụ adịpụ nke Jupita ka a ga-amụrụ ihe n'ụzọ doro anya, nyocha na-egosi na ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide na-abawanye ka anyị na-abanye n'ime ụwa. A na-eme atụmatụ na isi mbara ala nwere ike ịdị ka nke ụwa.
Na omimi nke akụrụngwa kachasị dị n'ime ala, a na-emepụta oghere ndọta Jovian. N’elu magnetik karịrị nke bywa site na ihe dị ka ugboro 14. Agbanyeghị, oke polar ya na-agbanwe n'akụkụ ụwa anyị. Otu n'ime anyị compass ga-atụ n'ebe ugwu na ndịda. Igwe magnet a na-ewepụta nnukwu eriri radieshon nke ihe ndị ahụ ejidere. Ngwurugwu ndị a gbara mbara ala dị anya site na kilomita 10.
Satellị kacha mkpa
Ruo ugbu a edekọtara Satọde 69 nke Jupita. Ihe ngosi ndi ohuru gosiputara na onu ogugu nke ugwo buru ibu na-agbaso usoro nke usoro mbara igwe n'onwe ya. Isi Satellites na-akpọ Io, Europa, Ganymede na Callisto. Abụọ ndị mbụ dị nso na mbara ala, ok na okwute. N'aka nke ọzọ, Ganymede na Callisto dị anya ma bụrụ ndị ice nwere ọtụtụ ndị pere mpe mejupụtara.
N'oge e guzobere satellites ndị a, ịdị nso nke etiti ahụ na-eme ka ihe ndị kachasị nwee ike ịda ma mepụta nchịkọta ndị a.
Site na ozi a ị ga - enwe ike ịmata ụwa nke ọma karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Planetwa Jupita